Guterres: ‘Waa in la baaraa weerarkaas si deg deg ah cadaalada loo horkeeno kuwii ka mas’uulka’… – Hagaag.com
Guterres: ‘Waa in la baaraa weerarkaas si deg deg ah cadaalada loo horkeeno kuwii ka mas’uulka’…
Illaa todobo madaafiic ayaa ku dhacay xarunta UNSOM ee ku taal xeyndaabka Xalane, waxaa ku dhaawacmay labo ka mid ah shaqaalaha UN-ka iyo hal qandaraasle, waxaa la sheegay in dhamaantood dhaawacooda uu yahay mid fudud.
Antonio Gutters ayaa sheegay in ficilkan uu yahay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bani’aadanimada..
Mr Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay arrintan baarto “Waa in la baaraa weerarkaas, si degdeg ah cadaalada loo horkeenaa kuwii ka mas’uulka ahaa”ayuu yiri Antonio Guterres.
Waxaa uu sheegay in weerarkan aanu dib u dhigi doonin dadaalada Qaramada Midoobey ee sii wadida taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, sidii nabadda iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta UN-ka ee magaalada Muqdisho.
Saacado kaddib weerarkaas dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal dalka looga ceyrinayo Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom kaddib markii lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay madax banaanida Soomaaliya.